အခမဲ့ စာအုပ် & ဖုန်း software - Learn English Actively and Effectively in Yangon !!! 09 4311 5202 ' : ''; var month = [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]; var month2 = ["Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec"]; var day = postdate.split("-").substring(0,2); var m = postdate.split("-"); var y = postdate.split("-"); for(var u2=0;u2
Home / အခမဲ့ စာအုပ် & ဖုန်း software
Active English ( www.facebook.com/MmEnglishLearning ) ရဲ့
အမှတ်တရ Ebook ဒီမှာ ရယူဖတ်ရှူနိုင်ပါပြီ ခင်ဗျာ ...
အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါဗျာ ...
Active English Page ရဲ့ Fans နှစ်သောင်း ပြည့်တဲ့ အနေနဲ့ အမှတ်တရ စာအုပ် ( Ebook ) လုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီး ကြေငြာခဲ့ပြီးမှ သတ်မှတ်ရက်ထက် ၄ ရက် လောက် နောက်ဆုတ်ပြီးမှ တင်ပေးလိုက်နိုင်တဲ့ အတွက် အရင်ဆုံး တောင်းပန်ချင်ပါတယ်ဗျာ ။
အခုလို စာအုပ်လေးကို Download ချပြီး ဖတ်နေပြီဆိုတော့ www.facebook.com/MmEnglishLearning ( Active English) ကို အတော်အတန် သံယောဇဉ် ရှိပြီးသားလူတွေလို့ပဲ ယူဆ ပါရစေဗျာ ။
ဒီစာအုပ်မှာ ပါဝင်တဲ့ ကဏ္ဍလေးတွေကို အရင် ရှင်းပြ ပါ့မယ်ဗျာ ။ စာဖတ်သူတို့ အဓိက လိုအပ်တဲ့ လိုချင်တဲ့ အပိုင်းကို အဓိကထား ဖတ်နိုင်ဖို့ပါ ။
( ၁ ) စ စ ချင်းတော့ Vocabulary အသုံးအနှုန်း လေ့ကျင့်ခန်း နဲ့ ရှင်းလင်းချက် ဆောင်းပါး ၃ ပုဒ် ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ် ...
"Have" ကို သုံးစွဲပုံ ( ၂ ) ပုဒ် နဲ့ "Say,speak,talk,tell,..." တို့ကို သုံးစွဲပုံ ( ၁ ) ပုဒ် တို့ ဖြစ်ပါတယ် ...
( ၂ ) နောက်ထပ် ထည့်ပေးထားတာကတော့ "မြန်သွက်မှန်ကန် တုံ့ပြန်ရန် " ဆိုတဲ့ ဉာဏ်စမ်းလေးတွေပါ။ ( ၄ ) ခု ပါ ဝင်ပါတယ် ။
( ၃ ) အနေနဲ့ကတော့ ဟာသများမှ တဆင့် English စာလေ့လာခြင်း ( Learning English Via Jokes ) အစီအစဉ် အတွက် ( ၂ ) ပုဒ် ထည့်ပေးထားပါတယ် ။ပေါ့ပေါ့ပါးပါး လေးပဲ ဖတ်သွားပါ ။ လေ့လာ ကျက်မှတ်ဖို့ထက် ထိတွေ့မှု ရရှိစေလိုခြင်းကို ဦးစားပေးတဲ့ အစီအစဉ် မှို့လို့ ဖြစ်ပါတယ် ။
( ၄ ) ကတော့ Idioms သုံးစွဲပုံလေးတွေနဲ့ ဉာဏ်စမ်းလေးတွေ ဖြစ်ပါတယ် ။ Elementary အဆင့် သိသင့်တဲ့ Idioms တွေကိုပဲ ရွေးထုတ်ပေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ် ။ စုစုပေါင်း ၁၀ ခု လောက် ပါဝင်ပါလိမ့်မယ် ။
( ၅ ) မှာတော့ English ဘာသာစကား ကို အသုံးချအဆင့် လေ့လာလိုသူတို့ အတွက် အရေးကြီးတဲ့သဘောတရားလေး တစ်ခု ကို မိတ်ဆက်ရင်း အားပေး ပေးထားပါတယ် ။ "Grammar Tranlsation Method & Motivation " ဆိုတဲ့ စာစုလေးပါ ။ ပါးပါးလေးပဲ ပြောပေးထားတာပါ။ နောင်ကျမှ အကျယ် ဆွေးနွေးပေးသွားဖို့ အစီအစဉ် ရှိပါတယ် ။
( ၆ ) မှာတော့ ခဏ လေး သည်းခံ ရပါမယ် ခင်ဗျာ ။ သင်တန်း ကြော်ငြာ ဖြစ်နေလို့ပါ ။ J http://www.facebook.com/MmEnglishLearning Page ကို စိတ်ဝင်စားလို့ ဝင်ကြည့်ရင်း ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ၊ ဒီစာအုပ်လေးကို ဖတ်ကြည့်ပြီး စိတ်ဝင်စားလို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် သင်တန်းတက် ရောက်ရန် စိတ်ဝင်စားလာတဲ့ မိတ်ဆွေများ အတွက် ရည်ရွယ်တာ ဖြစ်ပါတယ် ။
( ကြိုပြောပြထားတော့ ကြော်ငြာ မဖတ်ချင်လည်း ကျော်သွားလို့ ရတာပေါ့ဗျ နော့ )
မိမိအတွက် ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ၊ မိမိ သူငယ်ချင်း ဆွေမျိုးတွေ အတွက် ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဖတ်ရှူ လေ့လာကြည့်နိုင်ပါတယ်ဗျာ ။
( ကျွန်တော်တို့ Active English သင်တန်းရဲ့ ထူးခြားချက် ၂ ချက်ကို ဒီမှာကတည်းက ကြိုပြော ပါရစေ ...
( ၁ ) သင်ကြားမှုပုံစံ နှင့် မိမိ၏ တိုးတက်မှု အပေါ် စိတ်တိုင်းကျ ကျေနပ်မှု မရှိပါက " ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်း " ငွေပြန်အမ်းပေးပါမည် ။
( ၂ ) လူငယ်များ အတွက် အသုံးချ English ဘာသာစကားကို Motivation , Personal Development , Goal Setting , Job Hunting , Social Networking & Effective Thinking , Entrepreneurship စသည့် ဘာသာရပ်များနှင့် မိတ်ဆက် တွဲဖက် သင်ကြားပေးနေသည် ။
အမှန်တကယ် စိတ်ပါဝင်စားသူများကို Library အသုံးပြုခွင့်ပေးပြီး သင်တန်းချိန်ပြင်ပ တွင်ပါ သီးသန့် ဆွေးနွေးအကြံပြုပေးခြင်း ... ဆိုတဲ့ ( ၂ ) ချက်ပါ ။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပထမဆုံး ဘာညာ နဲ့ ပေါတောတောတော့ မကြေငြာရဲပါဘူးဗျာ ။ ဒါပေမယ့် ဒီလို ဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့ Language သင်တန်းမျိုး ရှားမှာပါ ။
အခု ကတည်းက ကြိုပြီး ကြော်ငြာလိုက်မိပြီ ... :P
( ၇ ) အနေနဲ့ကတော့ ကျွန်တော် အကြိုက်ဆုံး အစီအစဉ်ပါ ။ ဆိုရိုးစကားများ မှတဆင့် ဘာသာစကား လေ့လာခြင်း ( Learning English Via Quotes ) ဖြစ်ပါတယ် ။ English ဘာသာစကားသာမက စိတ်ဓာတ်ခွန်အား ၊ အသိပညာ တိုးတက်စေဖို့အတွက်ပါ ကျွဲကူးရေပါ ဖြစ်သွားနိုင်အောင် ရည်ရွယ်ထားတာမှို့ ကျွန်တော့် အကြိုက်ဆုံး ဖြစ်ရခြင်းပါ ။ မိတ်ဆွေများလည်း နှစ်သက်လိမ့်မယ် လို့ မျှော်လင့်ပါတယ် ။
ထပ်ပြောပါရစေ ။ ဘာသာစကားကို ချစ်စိတ် မွေးမြုတဲ့ အပိုင်းလောက်ကိုပဲ အဓိက ရည်ရွယ်တာမှို့လို့ အသေးစိတ် ရှင်းလင်းချက်တွေ မထည့်ပေးထားပါဘူး ။ အရသာ ပျက်စေတယ် လို့ မြင်လို့ပါ ။ ( ဘာသာပြန်ပေးရတာတောင် သိပ်အားမရ လှပါဘူး )
( ၈ ) ကတော့ ကျွန်တော် ကတိပေးထားတဲ့ အတိုင်း English ဘာသာစကားလေ့လာမှု အပိုင်းမှာ မဟုတ်တဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့ သီးသန့် Personal Development ကိုယ်ရည် ကိုယ်သွေးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ ဆောင်းပါး တစ်ပုဒ် ဖြစ်ပါတယ် ။ သိသင့်တယ်လို့ ထင်လို့ ( မိတ်ဆွေတို့ သိပြီး ဖြစ်ရင်တောင် မသိသေးသူတွေကို လက်ဆင့်ကမ်းပေးနိုင်အောင်လို့ ) ထည့်သွင်း ဖော်ပြပေးရခြင်း ဖြစ်ပါတယ် ။ Effective Thinking ဘာသာရပ် မိတ်ဆက် ဖြစ်ပါတယ် ။
" ဘယ်လို ထိထိရောက်ရောက် တွေးကြမလဲ " လို့ နာမည်ပေးထားပါတယ် ။
( ၉ ) မှာကတော့ ဧရာဝတီ စာပေပွဲတော် ကျွန်တော် ဝင်ပြိုင်စဉ် က ခံစားချက် ကို ရေးထားတဲ့ စာစုတစ်ပုဒ် နဲ့ အဲဒီ တုန်းက ဆုရခဲ့တဲ့ ( လက်ရှိကင်းကွာလို့ မရတဲ့ နိုင်ငံရေး အခြေအနေ တစ်ရပ်ပေါ်မှာ ရေးဖွဲ့ထားတဲ့ ) ဝထ္တုတို တစ်ပုဒ် ဖြစ်ပါတယ် ။ ခေါင်းစဉ်က " ပြောင်းလဲ နေသော ဘဝ များ " ဖြစ်ပါတယ် ။
အမှတ် တရ ထည့်ပေးလိုက်တာပါ ။ အမှန်တော့ ကြွားချင်တာလည်း ပါ ပါတယ် ။ :)
ကျွန်တော် ဘယ်လိုလူဆိုတာ ကို ကျွန်တော့်စာတွေ ကနေတဆင့် ခန့်မှန်းလိုသူ မိတ်ဆွေ တွေအတွက် ရည်ရွယ်ပါတယ် ။
( ၁၀ ) မှာတော့ ကျွန်တော်တို့ Active English ( Active Learning Society ) သင်တန်းကို အမှန်တကယ် တက်ရောက်လိုသော်ငြားလည်း ငွေကြေးအခက်အခဲ ရှိနေတဲ့ မိတ်ဆွေ တို့ အတွက် အစီအစဉ်လေး တစ်ခုကို ထည့်သွင်းပေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ကျွန်တော် ဘဝပေး အခြေအနေအရ အခုအချိန်မှာ စီးပွါးရေး ကို အဓိက လုပ်နေရပေမယ့် လူမှုရေးဘက်မှာလည်း တတ်နိုင်သလောက် တစ်ပြိုင်တည်း လုပ်ပေးသွားဖို့ စီစဉ်ထားလို့ပါ ။
လိုအပ်မယ် ထင်တဲ့ လူတွေ တိုင်း အတွက် ရည်ရွယ်ပါတယ် ။ ဖတ်ရှုလေ့လာပြီး ကိုယ်တိုင်မလိုအပ်ရင်တောင် တဆင့် လမ်းညွှန်ပေးနိုင်ပါတယ် ။
အထက်ပါ ကဏ္ဍ ( ၁၀ ) ခု နဲ့ ဒီစာအုပ်ကို ဖွဲ့စည်းထား ပါတယ် ။
ကျွန်တော် ဒီစာအုပ်မှာ အတော်လေး ထည့်ပေးချင်ပေမယ့် မထည့်သွင်းပေးလိုက်ရတဲ့ ကဏ္ဍတစ်ခု ရှိပါတယ် ။
English ဘာသာစကား လေ့လာနည်း စနစ်များ ဆိုတဲ့ ကဏ္ဍ ပါ ။
မပြည့်စုံသေး ဘူးလို့ ထင်တာရယ် ၊ အငြင်းပွါးစရာ ထူးခြားတဲ့ အယူအဆ အတော်များများ ပါနိုင်တာရယ် ၊ စာအုပ် သီးသန့်ထုတ်ဝေဖို့ ရည်ရွယ်ထားတာရယ်ကြောင့် မထည့်ပေးလိုက်ရတာပါ ။နောင်ကျမှ မိတ်ဆွေတို့ကို သီးသန့် မျှဝေပါဦးမယ် ။
အခုတော့ အမှာစာတောင် အတော်ရှည်သွားပြီဆိုတော့ တော်သင့်ပြီ ထင်ပါတယ် ။ J
ဒီလို ( Ebook ) စာအုပ်မျိုးကို (3) လ တစ်ကြိမ်လောက် ထုတ်သွားနိုင်အောင် ကြိုးစားသွားပါ့မယ် ။ ဒီကြားထဲမှာ အဆက်အသွယ် မပြတ် ဖတ်ရှူချင်တယ်ဆိုရင်တော့
http://www.facebook.com/MmEnglishLearning တို့ကို လာလည် ဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါရစေဗျာ ။
ကိုဇင်ဇေ ( Founder @Active English-ALS)
Ph : 09 4311 5202
English ဘာသာစကား လေ့လာသူများ အဆင်ပြေစေရန်အတွက် Android Application (Apk ) တစ်ခု
Active English ( MmEnglishLearning Page ) ရဲ့ Fans များ ၊
English ဘာသာစကား လေ့လာသူများ အဆင်ပြေစေရန်အတွက်
Android Application (Apk ) တစ်ခု ကို ဖြန့်ချီပေးလိုက်ပါပြီ ခင်ဗျာ ။
Active English ရဲ့ MmEnglishLearning Page မှာ တင်သမျှ
Posts တွေ အားလုံးကို အင်တာနက် တစ်ချက် ဖွင့်လိုက်ရုံနဲ့
အလွယ်တကူ ကြည့်လို့ ရပါပြီ ။
သိမ်းထား ပြီး ထပ်ခါထပ်ခါ လေ့လာနိုင်ပါပြီ ဗျာ ။
အောက်က link မှာ download ချပြီး အလွယ်တကူ install လုပ်နိုင်ပါတယ် ။
အလိုလျှောက် posts များ ကျလာခြင်း မရှိပါက
" Sync Now" ဆိုတာ လေးကို နှိပ်ပေးလိုက်ပါ ။
Posts တွေ ကျလာတာ ကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ် ။
အားလုံး အဆင်ပြေပါစေဗျာ ။
ပန်းတိုင်တွေ့၍ တွေ့သော ပန်းတိုင် အရောက်လှမ်းနိုင်ကြပါစေ ။
Active English ( MmEnglishLearning Page ) က ပုံမှန်တင်နေတဲ့ Posts အမျိုးအစားများကတော့
၁။ စိတ်အားတက်ကြွဖွယ် ၊ မှတ်သားဖွယ် ဆိုရိုးစကားများမှ တဆင့် English ဘာသာစကားလေ့လာခြင်း
၂။ စိတ်ကြည်နူးဖွယ် ဟာသများမှ တဆင့် English ဘာသာစကားလေ့လာခြင်း
၃။ Vocabulary သုံးစွဲပုံ ရှင်းလင်းချက်များ ၊ လေ့ကျင့်ခန်း နှင့် ဉာဏ်စမ်းများ
၄။ Idioms သုံးစွဲပုံ ရှင်းလင်းချက်များ ၊ လေ့ကျင့်ခန်း နှင့် ဉာဏ်စမ်းများ
၅။ အသုံးချ သဒ္ဒါ (Applied/Essential Grammar)
၆။ စကားစမြည် ပြောခန်း များ ( Conversations )
၇။ နားထောင်မှူ စွမ်းရည် လေ့ကျင့်နိုင်ရန် အသံဖိုင်များ ( Listening )
၈။ English ဘာသာစကား ဆိုင်ရာ Ebook များကို
နောက်ထပ် တင်ပေးသွားဖို့ စီစဉ်နေပါတယ်ဗျာ ....
ကိုဇင်ဇေ ( Founder & Trainer @ Active English )
Ps : Share လုပ်ပြီး အချင်းချင်း မျှဝေပေးတဲ့
မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းများကို ကျေးဇူး အထူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ ...